at 11:22 AM Posted by myo0comments
အိမ်မက်တွေနဲ့ကမ္ဘာ(ခေါင်းစဉ်မှာ မူရင်းစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံအတိုင်းဖြစ်ပါသည်)
ညကအိပ်မက်ကို မနက်အထိ သတိရနေဆဲ၊ သတိရရင်းက ရင်တွေတလှပ်လှပ်ခုန်သည်က မပျောက်သွားသေး။ အိပ်မက်ထဲမှာ ကိုယ်ဟာ ဘုရင်မကြီးတဲ့၊ အိပ်မက်ထဲကလို အပြင်မှာလဲ တကယ်ပဲ ဘုရင်မဖြစ်နေရင် ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲ၊ တွေးရင်းတွေးရင်း ဘုရင်မလဲမဖြစ်ချင်ပါ၊ အိပ်မက်သည် တကယ်မဟုတ်ဆိုပေမယ့် ထိုအိပ်မက်ကို သတိရနေမိပြန်သည်။
၁။ ဘုရင်မကြီးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်ကို ဘုရင်တပါးက တူနှစ်ကိုယ်တိုင်းပြည် ထူထောင်ကြစို့ဆိုကာ အတူလက်တွဲအုပ်ချုပ်ကြလေသည်။ ကိုယ်က ဘုရင်မကြီးပဲ။ ရှင်ဘုရင်နဲ့ညား မိဖုရား ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းဆို သူကရော၊ သူက အိပ်မက်ထဲမှာလဲ ဘုရင်ကြီးပါပဲ၊ ကိုယ်လဲ ဘုရင်မ သူကလဲ ဘုရင်ကြီးပါပဲ၊ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ထဲကို ဘုရင်မရော ဘုရင်မကြီးပါ ပူးတွဲအုပ်ချုပ်သည်။ အပြင်မှာတော့ ဒါမျိုးရှိသည် မကြားဖူး။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ သူ့ဟာနဲ့သူ ဟုတ်လို့နေသည်။ ဘယ်လောက် အဆင်ပြေသနည်းဆို အနှစ်(၂၀)တောင် နန်းသက်ရနေသည်တဲ့။ အိပ်မက်ထဲမှာ။ သားတော်သမီးတော်ကလဲ (၃) ပါးတောင်ရှိနေသည်။ ဘုရင်မကြီးလဲ သက်တော် အတော်လေးရလာသည်။ ဒီအချိန်မှာ ဘုရင်ကြီးကစပြီး စိန်ခေါ်လေသည်။ သူလဲ ဘုရင်ကြီးဖြစ်ပါလျှက် ဘုရင်မကြီးပြောသမျှ အမိန့်တော်ချသမျှနေလာခဲ့တာ နှစ်ပေါင်း (၂၀) ကျော်လာခဲ့ပြီ။ အခု သီးမခံနိုင်တော့ပါ။ ဘုရင်မကြီး ကန့်သတ်ထားသောအမိန့်တွေကို ပယ်ဖျက်ပေးပါတဲ့။ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲ ဘုရင်မကြီး မသိတော့ပါ။ ဘုရင်မကြီးချမှတ်ထားသည့် သူ့အတွက် ဘတ်ဂျက်ကို ပြင်ဆင်ပေးပါ၊ ဘုရင်မကြီး သတ်မှတ်ထားသည့် မည်သည့်နေ့တွင် ဘာအသား၊ နွား နို့ကဘယ်လောက် အသီးက ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ၊ စတာတွေကိုလဲ သုံးဆောင်ချင်မှ သုံးဆောင်မည်။ ကိုယ်သုံးဆောင်ချင်သည်ကို အချိန်မရွေး ဘယ်နေ့ဖြစ်ဖြစ် သုံးဆောင်မည်တဲ့။ နောက်တခုက ဘုရင်ကြီးသည် ယစ်ရွှေရည်ကို အင်မတန် နှစ်သက်တော်မူရာ ဘုရင်မကြီးက တန်ဆေးလွန်ဘေးဖြစ်မည်ဆိုကာ ကန့်သတ်ထားပီး တနေ့ ဒီမျှသာဆိုတာကို လက်မခံတော့ပါ။ သူကြိုက်တာကို သူ့စိတ်ကြိုက် သောက်ခွင့်ပေးရမည်တဲ့။ ဒါတင်လားဆိုတော့ မပြီးသေးပါတဲ့၊ ဘုရင်ကြီးသည် ဘုရင်မကြီးအမိန့်ဖြင့် ကပွဲသဘင်တွင် မကရတာ တော်တော်ကြာနေပြီ။ ဘုရင်ကြီးက အဆိုအက အင်မတန်ဝါသနာပါလေရာ အောင့်အီးသည်းခံခဲ့ရတာ တော်တော်ကြာခဲ့ပါပြီတဲ့။ အခုတော့ သည်းမခံနိုင်ပါ။ သူ့စိတ်ထဲ ကချင် ဆိုချင် လာရင် ကပွဲသဘင်မှာ ကမည် ခုန်မည် ၊ မတားပါနှင့်တဲ့။ ဒီတောင်းဆိုချက်တွေကြားတော့ ဘုရင်မကြီးမှာ ရုတ်တရက် ဒေါသထွက်သည်။ ပညာရှိအမျက် အပြင်မထွက်ဆိုတဲ့ဆိုရိုးအတိုင်း အပြင်မထွက်အောင် ထိန်းရင်းက စဉ်းစားတော်မူလေသည်။ ဒါတွေ ချမှတ်ထားတာ ဘယ်သူ့အတွက်လဲ။ ကိုယ့်အတွက် မပါ၊ ဘုရင်ကြီးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ ရာဇအိနြေ္ဒအတွက်ပင် မဟုတ်ပါလား။ ဒီဘုရင်ကြီးတော့ အသက်ကြီးမှ ဒုက္ခ လှလှ တွေ့တော့မှာပါလား။ ဘာလုပ်ရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘုရင်ကြီးအတွက် စဉ်းစားလို့မပြီးသေးခင်မှာ သားတော် သမီးတော်တို့က တစခန်းထလာကြပြန်လေသည်။ တချိန်ထဲမှာ တိုင်ပင်တော်မူထားကြသလား အောက်မေ့ရသည်။
သားတော်ကြီးက သူပြောပြောနေသည့် သူလိုချင်နေသည့် ချစ်စံအိမ်ဇာတ်ကားထဲမှာ မင်းသား ရိန်း စီးသည့် ကားကိုဝယ်ပေးရန် ဘတ်ဂျက်တောင်းသည်။ ဘုရင်မကြီးက အခုစီးနေသည့်ကားသည် တော်ဝင်တွေ စီးသည့်ကားဖြစ်တဲ့အပြင် ကားဆိုတာ စီးလို့ရ တော်ရောပေါ့ဆိုတာကို သူ လက်မခံနိုင်ပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆို အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်တောင် ဝယ်စီးနေပြီ၊ သူက ဘုရင့်သားတော်ဖြစ်ပီး မစီးနိုင်ရကောင်းလားလို့ အပြောခံနေရပြီ။ ဒါ့ကြောင့် ဝယ်မည်၊ ဘာအမိန့်မှလာမပေးနှင့် ဝယ်မည်တဲ့။ ခပ်တင်းတင်း တင်လျှောက်လေသည်။ သမီးတော်တွေက သူတို့အတွက် ထုတ်ပေးထားသည့် ဘတ်ဂျက်သည် အဝတ်အစားဘိုးပဲ ရသည်။ လက်ဝတ်ရတနာ ဖန်စီ ဆန်းဆန်းလေးတွေ မဝယ်ရတာကြာပြီ။ ဟိုဟိုသည်သည် ရှော့ပင်းထွက်ရင် မလောက်တော့ပါတဲ့။ ကမ်းခြေ အပမ်းဖြေသွားချင်တာ ဘတ်ဂျက်ကြည့်နေရတာနှင့် ဘယ်မှမရောက်တာ ကြာပါရောလားတဲ့။ ဘတ်ဂျက်တိုးပေး၊ လွတ်လပ်စွာ အစောင့်အရှောက်များမပါပဲ သူငယ်ချင်းများနဲ့ကမ်းခြေသွားရေး တင်ပြလာကြသည်။
ဘုရင်မကြီး စဉ်းစားနေရလေပြီ။ ဘုရင်ကြီးအပါအဝင် သားတော်သမီးတော်များက ဘုရင်မကြီး စဉ်းစားနေတာကိုမရိပ်မိပဲ မပေးချင်၍မသိယောင်ဆောင်ကာ ငြိမ်နေသည်လို့ထင်ကြဟန်တူသည်။ ဘုရင်မကြီး အိပ်ခန်းဆောင်အဝသို့ လာရောက်၍ အရေးဆိုကြတော့သည်။
လုပ်ချင်တာ လုပ်ခွင့်ရရေး.... တို့အရေး
လူ့အခွင့်အရေးပိတ်ပင်မှု ... အလိုမရှိ၊ အလိုမရှိ။
ဘုရင်မကြီး နားတွေအူလာသည်၊ ဆူညံသံတွေက နားအနီးကို အတင်းပဲကပ်လို့နေသည်။ မျက်လုံးဖွင့်ပီး ဒီလောက်တောင်ဆူညံရသလားပြောမည်ပြင်တော့ မျက်လုံးကဖွင့်မရ။ နောက်ဆုံး ဆူညံသံတွေက လွတ်အောင် အတင်းလူးလဲထဖို့လုပ်ရင်း နိုးလာသည်။ အိပ်ယာနဘေးမှာ အိမ်ဦးနတ်က ဘီဘီစီလား အာအက်ဖ်အေလားဖွင့်ပီး နားထောင်နေသည်။ ကျမလဲ ပုခုံးပေါ်ကျနေသည့်ဆံပင်တွေကို ကလစ်တခုဖြင့် စုညှပ်ရင်း ဘာလုပ်တာလဲမေးမိသည်။
"မေ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် အိပ်ပျော်နေတာတွေ့လို့ ကိုယ်တိုင်မနှိုးရက်လို့ အသံပေးတာလေ"တဲ့။ ကျမရယ်လိုက်မိသည်။ ခေါင်းရင်းကနာရီကို လှမ်းကြည့်တော့ နံနက် ၆ နာရီနဲ့ မိနစ်လေးဆယ်။ ခါတိုင်း ၆ နာရီခွဲဆို ပုံမှန်နိုးနေကျ၊ ဒီနေ့အိပ်မက်က ရှည်လို့လားမသိ၊ နောက်ကျနေပြီ။ ကလေးတွေ ထမင်းဗူးအတွက်၊ နံနက်စောစောစာအတွက် ချက်ရပြုတ်ရမည်။
အင်း........ ရေဒီယို အသံကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဒီမိုကရေစီရရှိရေး တို့အရေးတွေ ရောကုန်တာလားမသိပါဘူး။ တွေးရင်းက အမိန့်တော်မမှတ်လိုက်ရသည့် အိပ်မက်ထဲကဘုရင်မကြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိရမိတော့သည်။
၂။ ည တစ်နာရီခွဲမှ အိမ်ပြန်ရောက်လာသည့်ခင်ပွန်းသည်ကို ဒီမနက် စကားပြောဖို့ မောင်းတင်ထားသည်။ ညကတည်းကပြောချင်ပေမယ့် ကိုယ်စိတ်ပူနေတာရော၊ ကလေးတွေကလဲ စိတ်ပူပီး မျှော်နေတာတွေရော စိတ်မောလူမော ဖြစ်ရတာရယ်၊ ညဥ့်လဲ အတော်နက်နေတာရယ်ကြောင့် မပြောပဲ အသာလေးမြိုသိပ်နေ ခဲ့ရသည်။ သူ့ကို စကားပြောချင်နေတာ ရိပ်မိသည်ထင့်၊ ရှောင်ဖယ်ရှောင်ဖယ် လုပ်နေသည်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ရှောင်မရတော့မှ "ကဲ.. ပြော ဘာပြောမလို့လဲ" စကားစလေသည်။
"နောက်ကျမယ်ဆို ဖုန်းလေးဘာလေးဆက်ပီး ပြောလေ၊ အခုတော့ အလုပ်ကနေပြန်မလာတော့ ဘယ်သွားမှန်းမသိ၊ ဘယ်လာမှန်းမသိ၊ ဖုန်းကလဲ ပိတ်ထားသေးတယ်။ အလုပ်ထဲက လူတွေကို လိုက်ဖုန်းဆက်မေးရ၊ အတူပြန်တဲ့သူတွေကို လိုက်မေးရ၊ အိမ်မှာနေတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက် စိတ်ပူရတယ်မှတ်လဲ" ကိုယ့်စကားဆုံးတော့
"အေး နောက်ဆက်မယ် ပြီးရောမှလား၊ ညကလဲ ဧည့်သည်ရောက်လာလို့ ဆိုင်မှာဧည့်ခံရင်း စကားပြောတာနဲ့မိုးချုပ်သွားတာ"
"အဲဒါ ညထဲက သိတယ်လေ၊ ဧည့်သည်က ကားထဲကဆင်းလာပီး လာနှုတ်ဆက်သေးတာပဲ၊ ဆိုလိုတာက သွားချင်သွားပါ၊ ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာသာ အိမ်ကိုအသိပေးဖို့ပြောနေတာ"
သူ့အပြစ်နှင့်သူမို့ ဘာမှပြန်မပြောပဲ အလုပ်သွားတော့သည်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲရှင်းသွားပေမယ့် သူ့စိတ်ထဲမကျေနပ်တာ ညဘက်အလုပ်ကအပြန်မှ သိရတော့သည်။ ယမကာလေးဝင်လာပီဆို အာသွက်လျှာသွက်သည့် သူ့ထုံးစံအတိုင်း "ကဲ.. မေ လာပါအုန်း၊ ဒီနေ့တော့ အပြတ်ရှင်းရမယ်၊ ကိုယ့်အခွင့်အရေးပြောတော့မယ်"
"မြတ်စွာဘုရား" မနေ့က အိပ်မက်ထဲကဘုရင်မကြီးကို သတိရမိတော့သည်။
"ကိုယ်က ဒီအိမ်မှာ အကြီးဆုံးပဲ၊ အဲဒါ မေ့အနေနဲ့ ဘာမှဆရာလုပ်စရာ မလိုဘူး၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်သွားသွား ဘာလုပ်လုပ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိတယ်၊ နောက်ပီး...." သူ့စကားဆုံးအောင် နားမထောင်တော့၊ "ဘာပြောတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသိပေမယ့် အိမ်ကလူတွေ မသိဘူးလေ၊ ကိုယ် ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာ အိမ်ကလူက ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ. ဒီလိုမပြောပါနဲ့" သူကလဲ သူပြောချင်တာ ဆက်ပြောသည်။
"နောက်တခုက ကိုယ့်မှာ အလုပ်၊ အလုပ်ကနေအိမ်၊ အိမ်ကနေ အလုပ်။ ဒါနဲ့ပဲ လုံးလည်လိုက်နေတယ်၊ အနုပညာဆိုတာ ကိုယ့်မှာပျောက်ကွယ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာဘီလဲ၊ အနုပညာကို မခံစားရတာ ဘယ်လောက်ကြာပီလဲ"
"ကဲ.. ဒါဖြင့် ကို ဘာလုပ်ချင်လဲ."
"ကာရာအိုကေ သွားဆိုချင်တယ်၊ မေ နေရာတကာ လိုက်မပြောပါနဲ့။ ကိုယ့်မှာ ဒီမိုကရေစီပျောက်နေတာကြာပီ၊ ကိုယ့်အတွက် ဒိမိုကရေစီအခွင့်အရေးရမှဖြစ်မယ်။ ဒီနေ့ပဲ တိုက်ပွဲဝင်တယ်။ဒီနေ့ ဒီရက်ကစပီး ဆိုမယ် ကမယ်၊ ကလပ်မှာ မကရတာလဲ ကြာပီ၊ ဒါပဲ ကဲ မေ မင်းဘာပြောချင်လဲ"
ကျမ စိတ်ထဲအတော် မကောင်းဖြစ်ရသည်။ ကိုယ်က နေရာတကာ လိုက်ပိတ်ပင်နေသည့် လူစားမျိုးလဲမဟုတ်၊ သူအရက်ဆိုင်ထိုင်တုန်း ဘယ်ဆိုင်မှာရှိနေတယ်လာခဲ့ဆို အတူလိုက်ထိုင်ဖူးသည်။
ကလပ်မှာ အလုပ်ထဲကသူငယ်ချင်းတွေစုပီး ကကြခုန်ကြမည်၊ အားလုံးစုံမှာမို့လိုက်ခဲ့ပါဆို ကလပ်ကဆူညံသည့် ဒိန်းကနဲဂီတသံက နှလုံးကိုလာဆောင့်သလို ခံစားရသော်လည်း လူမှုရေးအရ လိုက်ပါခဲ့ပေးသည်။ သူတို့အကကို ကိုယ်ကိုတိုင် မကတတ်သလို မကြိုက်လဲမကြိုက်တာတောင် ခုံတလုံးနှင့် ထိုင်ကြည့်နေခဲ့ပေးဖူးသည်။ ဘာမှမပြောချင်တော့၍ ဘာမှမပြောပဲ နှုတ်ဆိတ်နေလိုက်မိသည်။ မနက်ကျ ထပ်ပြောလာလျှင် ”ကြိုက်သလိုလုပ်”လို့ ပြောရမည်လား၊ ကို့မှာ သွေးတိုးရောဂါရှိတယ်လို့သိကတည်းက အရက်ကို ဆိုင်မှာမသောက်ပဲ အိမ်မှာသောက်ဖို့၊ အသက်ကြီးလာတဲ့အတွက် ကလပ်တွေမှာ မကြီးမငယ်နဲ့ခုန်ပေါက်ကခုန်နေတာ မသင့်တော်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့တာတွေက ဘယ်သူ့အတွက်လဲ စသဖြင့် လေပြေထိုးရမှာလား။ လားပေါင်းများစွာ စဉ်းစားရင်းက အိပ်မက်ထဲကဘုရင်မကြီးဖြစ်ခဲ့စဉ်က တစုံတခုအမိန့်မချခဲ့ပဲ လန့်နိုးလာတာကို သတိရမိတော့သည်။
"မေရေ.. ညက ကိုယ် နည်းနည်းများသွားလားမသိဘူး၊ ကိုယ့်ကို ဆေးပေးပါအုန်း"
"ကာရာအိုကေ ဆိုဖို့ရယ်၊ ကလပ်သွားဖို့ရယ် ဘတ်ဂျက်တိုးပေးလိုက်တယ်" ကျမရဲ့စကားအဆုံးမတော့ သူက တဟားဟားရယ်ရင်း ”မူးလို့ ပြောတာပါကွာ။ ကိုယ့်အသက်တောင် မနည်းမွေးနေရတာ၊ ဘယ်ကလပ်သွားက နိုင်မှာလဲ" ကျမစိတ်ထဲကျေနပ်ပေမယ့် ကိုယ်ကပဲ ပိတ်ပင်သယောင် အမျိုးမျိုး(အချိုးမျိုး ဖြစ်မည်ထင်) ပြောနေတာကို ထပ်မကြားချင်တဲ့အတွက် "ဒီမှာ ရှင့်ကို ဒီမိုကရေစီပေးပီးသား... ကို့ဘာသာကြိုက်တာလုပ် လူတိုင်းမှာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်၊ မတားဘူး၊ တားတယ်ဆိုတာ အားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ပဲ"
"ဟုတ်ပါတယ်မေရယ်၊ ဒီအိမ်မှာ မေက ဘုရင်မပဲ၊ မေ စီမံတာ ကောင်းတာချည်းပဲလေ၊ ဘုရင်မကြီးဆိုတော့ ကြိုက်သလိုစီမံခန့်ခွဲပါ ဟုတ်ပီလား" လာပြန်ပီလား ဒီဘုရင်မ၊ အိပ်မက်ထဲမှာလဲဘုရင်မ၊ အပြင်မှာလဲ နောက်သလိုလိုနဲ့ သူ့အပြောက ဘုရင်မတဲ့၊
ဟိုးတရက်ကအိပ်မက်ကို ဒီညဆက်မက်လို့ရရင်ကောင်းမည်။ အိပ်မက်ထဲက ကိုယ်ဖြစ်နေသည့်ဘုရင်မကြီးက အမိန့်တစ်စုံတရာချလိုက်လျှင် အိပ်မက်ထဲကဘုရင်ကြီးက ဘာပြောမလဲ သိချင်နေမိသည်။ ဘုရင်ကြီးအပြောကိုသိလိုသဖြင့် အိပ်မက်ဆက်မက်ချင်နေသေးသည်။ ကိုရယ် ဘုရင်ကြီးရယ်၊ ကိုယ်ရယ် ဘုရင်မကြီးရယ် အိပ်မက်ထဲမှာလုံးထွေးလိုက် ဆုံးဖြတ်လိုက် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ။ ဒီလိုပဲ အိပ်မက်တွေနဲ့လုံးထွေးရင်း ဘုရင်မကြီးဖြစ်လိုက် နိုးလာလိုက်နဲ့ပဲ ကျေနပ်နေရတော့မည်ထင်သည်။